श्रीमान काममा गएपछि श्रीमतीले बोलाउने गर्थिन् केटासाथीहरु, खान्थिन र’क्सि (भिडियो) – live 60media
काठमाडौ । कान्छा मोक्तानको दिन अहिले रोएरै बितिरहेको छ । आफुले दुख गरेर कमाएको ५० हजार रुपैया र आफ्नो एक वर्ष पनि नपुगेको सन्तान समेत लिएर श्रीमति हराएपछि उनी निकै दुखी भएका छन् । दुई वर्ष देखि संगै बस्दै आएका कान्छाकी श्रीमति अञ्जना लिम्बु अहिले एक वर्षको छोरी लिएर हिँडेको कान्छाले बताएका छन् । उनी दहचोकमा बस्दै आएका छन् ।
← ज्योतिषशास्त्र अनुसार हप्ताको सात बारमा खान नहुने यी चीज के हुन ?
बिजय शाही लामो समय पछी हात जोड्दै मिडियामा, के भयो ? (हेर्नुस् भिडियो) →